Ibsa Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo Godina Awurophaa. -
bilisummaa February 26, 2015	2 Comments
Nuti miseensoni Adda bilisumma oromoo godina Awuropha hala dhiyenaa kana matan motummaa wayyannee kan ta.e abbay tshayen dhamsaa karoora abbotii isaa kan duguggaa sanyii Genocide Ilmaan oromoo irraati labsuu isaa irraa kan ka,e nutis akka miseensota Adda bilisummaa oromoo fi akka lammii oromoo tokkoti dhamsaa kena Hawaasa oromoo hundaaf ibsina. Ilmaan oromoo guyyaa gabrumaa jalati kufaanii kaassee halkaani fi guyyaa baddaa fi gammoojii roba fi aduu osoo hin jedhiin qabsoo saba isani galmaan gayyuuf diinaa mirgaa isaani sarbe kufaa fi kufisaa jiru.
Dhumaa bara 1980 keessaa ergaa ummaanii oromoo sirnaa gabrofatuu Habashotaa jalatii kufee kaassee sirnii habashotaa kun oromoo fi oromiyaa dhabsiisuf jechaa dhagaan isaan hin fonqochiin hin jiruu haa ta,uu malee akkuma minilikii abbotaa kena Harkaa Muree fi Ayyota Harmaa mure oromiyaa dhunfatee sabani kena akka sirnaa isaa kan ta,ee sirnaa Gadaatin akka of hin bulchiinee godhaamee jira. guyyaa saan irraa kaassee ummaani oromoo qabsoo isaa halkaani fi guyyaa godhaa tureen oromiyaa fi oromumma akkasumas afaan oromoo akka afaan barnoota ta,uu godhee jiraa haa ta,uu malee haali ammaan kana sirna abbaa irree waayyaanneen godhamaa jiruu maqaa dimookrasii jalatii dhokachuundhan oromoo fi oromiyaa dhabamsiisu ta,ee jira . Akkuma bekamuu Yeroo ammaan kana maqaa Master plani Finfinnee jedhuun gabromfatuun waayyaanne lammiillee oromoo 2,000,000 olitii lakkayyaaman dachee abbaa isaani irraa buqisuuf halkaanif guyyaa kara daballootaa fi jaledhaan isati fayyaadamuun saba kena dachii umaamaan rabbiin isani kene fi irraati umaamani irraa jiraata turan sababaa maqaa maste plani finfinnee jedhuun buqisuuf karoorfatuun ishee bekamaa dhaa. sabaabuma kanan kaan waal qabatee bara 2014 keessa Oromiyaa godinallee addaa addaa keessatii dura dhabanoo Hawaasnii oromoo keessatu baratooni oromoo godhaaniin batalumaati baratooni oromoo 70 ol ta,an gara lafinaa tokkon malee rasaasa wayyanneetiin yeroo ajjeefaman kaneen dhibaa heduutii lakkayyaman maneen hidhaa wayyaane bakka addaa adda keessatii daraaramaa jiruu .
Kaneen dhibaa hedutii lakkayyaman biyyaa abbaa isaanii irraa baqachuun hirbataa qurxxumii fi gammoojjii sahara keessatii lubbun isaani baha jiraa. Mootummaan gabroftuu Wayyaanee karooraa fi imaammata Abbootii isaa irraa dhaale oromoo fi oromiyaa balleessuf waggoota 23 dabraniif dachee oromoo kaneen akka Boolee Bulbulaa, Laga Xaafoo, Aqaaqii, Sabbataa, Sulultaa, Buraayyuu fi kkf irraa qotee bulaa Oromoo buqisuun Dachee ilmaan oromoo sammuun gurgurataa fi hirataa as gahee jira, ilman oromoo sirnaa wayyaannetiin mormaan maqaa addaa addaa itti mogaasuun hidhuu ajjeesuu fi biyyaa abbaa isaani irraa baqqachiisuun har’a gahee jira.
Akkasumas magaalale akka Diree Dawaa fi Awadaay federala jala galchuun guyyaa borutiif akka isaani mijayuutii tolfataa jiruu. Akkasumaas saba fi sablamotaa naannoo oromiyaa qubataan saba oromoo waalin waalitti busun dachee oromoo mure saba biratif akka kena ture ni yaadatama ,Akkumaa yeroo ammaan kana magaalaleen Nannoo finffinnee jiraan federala jalatii deebi,u qabaa jedhani duguggaa sanyii Genocide saba oromoo irraatii rawwaata jiru, har,a bule boru Baddiyaalleen Nannoon Diree Dawaa fi Awadaay jiraan akka federalaa jalatii deebi,u jette TPLF laabsuun ishee waan hin oledha ,Bifumaa kanaanis Oromiyaa kukutaani balleessuun akka karoora gabrofatuu wayyaannee TPLF ta,ee sabni oromoo hundii isaa akka hubatuu qabuu jala saraaree saba oromootif dhamna. Sabni oromoo biyyaa fi biyyaa omba keessaa jiratuu harkaa waal qabatee sirnaa nama nyataa wayyaanee kan duguggaa sanyii ilmaan oromoo irraatii rawwata jiruu kana duraa dhabaachuun akka master plani wayyaanne kun akka hujiitti hin hikamneefis warreegamaa barbaachiisuu akka bahu qabu asumaan hubachiifnaa, dhaboleen maqaa siyaasa oromoo badhaatani jiraan hundii isaani tokkummaan akka sirnaa Namaa nyaata wayyaanee kana irraatii xiyyeefataan Akkasumas waan harkaa qaban hundan akka wayyaannee irraati tarkaanfi fudhataanis isaan gafan. dhumaa iraatii dhamsaa ilmaan oromo guttu adunyaa irraa jiran hundaaf .
1 Nuti miseensoni Addaa bilisummaa oromoo Godina Awurophaa hanga oromoo fi oromiyaan bilisomtuuti warregamaa nura egaamu hundaa hamaa warregamaa lubutii bafnee mirgaa saba kena kabachisuuf qophii dhaa.
2 waldaallen Hawaasaa oromoo guttu Adunyaa irraa jiran tokkummaan ka,ani akka master planiin wayyaanne kun hujii irraa hin olee mormii isaanii akka dhageesiisan gafana.
3 waldaan Dargaggootaa oromoo kan guttu Adunyaa irraa jiruu murtii gahaa fi sirnaa qabeessa ta,e akkasumas hama warregama lubutii akka of qopheessuu qaban gafan.
4 waldaan amaantallee oromoo hundii Islaama, Kiristanaa , Waqeefana wangeelaa fkk tokkummaan ka,ani akka master planiin kun hujii irraa hin olee mormii isaanii akka dhageesisaan gafana.
5 dhaboolleen siyaasa oromoo kaneen biyyaa keessaa fi ala tokkummaan akka masterpilani wayyannee kana dura dhabataan gafana .
6 waldaallen Dubartoota oromoo kara daandaayamee hundaan akka maste planin wayyanne kun hujii irraa hin ollee dirqamaa oromumma isaani akka bahan gafana.
7 dhumaa irraatii hawaasnii oromoo guttu Adunyaa irraa jiru humnaa. daandetii fi qabenyaa isaattin akka Adda bilisummaa oromoo B-G- Kamaal Galchutiin hoganamuu biraa akka dhabatan maqaa miseensotaa Adda Bilisumma Oromoo Godinaa Awurophaatiin Gafana.
InjjiifanoonUmmataOromoof MISEENSOTA ADDA BILISUMMAA OROMOO ABO GODINA AWUROPHAA
Tags Abo Kamaal Galchuu siyasaa
Previous Walaloo: Waanjoo Gabrummaa
Next Oromai System of Tigrean Nafxanya in Oromia!
Yaadni keessan gaariidha. haata’uu malee Oromoon kan Habashaan cabe 1980 keessa turee? mee irra deebi’aa ilaalaa. moo yeroo itti Kamaal waa’ee Oromoo dhaga’e eegaltaniiti?
barruun keessan illee Jabina hin qabu akka nama harkisuufii namatti dhaga’amutti barreessaa
maal Hogganni keesan waan darbe haa dhiifu jedhaa hinturee? Amma immooHabashaa fi Minilikiin balaaleffachuun erga G7 isiin gatee fidatanii? Amman booda sobaan essa ga`uun hin danda`amu. Yoo uumataati makkamuu barbaadan “ethiopia” keessan dhiisati bilisummaa Oromiaaf qabsoofna jedhaa labsaa. Hanga isiin “tokkummaa Itiyoopyaa ” tikisiina jetaniiti uumata waliin wal-ta`uun isinti cimti.